ပဲထောပတ်ထမင်း – မတရားသဖြင့် အီးဇီးကွတ်! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ပဲထောပတ်ထမင်း – မတရားသဖြင့် အီးဇီးကွတ်!
ပဲထောပတ်ထမင်း – မတရားသဖြင့် အီးဇီးကွတ်!
Posted by ဇီဇီ on Sep 29, 2013 in Food, Drink & Recipes, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 37 comments
မနေ့က ဇော်သန့်လာမယ်ဆိုလို့ သူ့ အကြောင်းပြပြီး ကိုယ်စမ်းချက်ကြည့်ချင်တဲ့ ပဲထောပတ်သမင်းချက်ကြည့်တာ။
အညာက မိတ်ဆွေ အစ်ကိုကြီး ခက်သီပို့ထားတဲ့ လက်ပံခေါင်းခြောက်ကို ချဉ်ရည်ဟင်း စမ်းချက်ကြည့်ချင်တာလည်း ပါတာနဲ့။
အပျင်းမ စဉ်းစားတာဆိုတော့ အလွယ်နည်းပေါ့။
အဲလာ ခရစ်(စ) က ချက်နည်းတင်ဆိုလို့ အပျင်းနည်းကို မရှက်မကြောက်တင်လိုက်သည်။
1) ညက ရေစိမ်ထားတဲ့ ကုလားပဲကို မနက်ကျပြုတ်ထားလိုက်တယ်။
ခါချက်ဥ ကြိုက်တတ်ရင် သေးသေးတုံးထားလိုက်။
ကြက်သွန်နီကို ဥလိုက်မကြိုက်လို့ လေးစိတ်ထိုးထားတာရယ် ပြင်ထားလိုက်တယ်။
ဆန်ကို ရေဆေးပြီး စစ်ထားလိုက်။
ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ/ချင်း/ငရုတ်သီးခြောက်ထောင်းထားတာကို ဘဲသားနဲ့လုံးပြီး တည်ထားပလိုက်။
2) နောက် ရိုက်(စ) ကိုကာထဲ ထောပတ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီ၊ သစ်ကြံပိုးခေါက် (ကရဝေးက မရှိ/ဝယ်ရမှာ ပျင်းးးးး) ထည့်ပြီးဆီသတ် ပြီးတော့ ကုလားပဲပြုတ်နဲ့ ခါချက်ဥ တုံးပြီးသားထည့် ဆန်ထည့်ပြီး ၂ မိနစ်လောက်မွှေလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ စပျစ်သီးခြောက်ရယ်၊ သီဟိုဠ်စေ့တွေပါ ပစ်ထည့်။ သကြားနည်းနည်း ဆားသင့်တော်ရုံ ထည့်ပြီး မွှေလိုက်ဦးးးးးးး
ရေထည့်နေကျ အချင် အတိုင်းရဲ့ တစ်ဘူးပိုထည့်ပြီး ထမင်းတည်သလို တည်ထားလိုက်။
ကျက်တော့ ခလုတ်တက်လာတဲ့ အချိန်ကြည့်လိုက် မွှေးလို့ပဲ။
ကြက်သွန်ဖြူ ကို ကျွတ်ကျော်၊ ဆယ်
နီ ကို ကျွတ်ကျော်၊ ဆယ်
ပုဇွန်ခြောက်ကို ကျော်၊ ဆယ်
နောက်ဆုံး ငရုတ်သီးခြောက် ကြော်ပြီးမှ ဆယ်ထားတာတွေ ရောကြော်ပြီး အပေါ့အငံ ခတ်လိုက်ပေါ့။
4) လက်ပံခေါင်းက ရေစိမ်ထားတုန်း
အိုးထဲ ဆီ နည်းနည်းထည့် ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီးကို ငပိနည်းနည်းထည့်လုံးးးး
အပေါ့ အငံမြီးပြီး အရည်တည်၊ ပွက်တဲ့ အချိန်ကို မန်ကျည်းမှည့်အရည်ကို ထည့်၊ နောက်တစ်ပွက်ကို လက်ပံခေါင်းထည့်လိုက်။ ပူနေရင် သောက်ကောင်းတာပဲ။ အဟေးဟေးဟေးးးး
5) ဘဲသား အပေါ့အငံ အိုကေရင် နူးပြီဆိုရင် စားလို့ရပြီ။
ကရဝေး ရွက် ဝယ်ရမှာပျင်းလို့ မပါတာရယ်။
ကုလားပဲ နူးဖို့ နည်းနည်းလိုတာလေးရယ် ကလွဲရင် ထမင်းသမား ပါးစပ်မှာ စားလို့ အကောင်းသားးးးးးး
အဲနီးဝေး.. အဲလောက်လွယ်တာ စမ်းချက်အူးမြီ.. :loll: စိတ်ထင်တာက ပဲထမင်းကို ပဲစိမ်းဘူးတွေနဲ့ချက်ရတာထင်တာ.. တခါမှလည်းမစားဖူးဘူး.. မနက်ဖြန်လက်တည့်စမ်းပါမြီ
ကုလားပဲ အစား ပဲစိမ်းလေးတွေနဲ့ချက်လို့ရတယ်တဲ့။
ဒီမှာက ဆိတ်သား အစစ်ရှားတယ်။
သိုးသားခေါ်သလားးးး အဲဒါပဲ ရလို့။
အဲ့ အသားက နံလို့ မစားဖြစ်ဘူးးးးးး
လာရင် သာ အကြောင်းကြားပါ။ ဟိဟိ
အခုမှပဲ မ ခိုင်ဇာ ရဲ့ Avatar ကိုကြည့်မိတယ် ။
Hamburger ကြီး ကိုင်ထားပါလား ။
Hamburger တောင် ရိုးရိုး မဟုတ်ဘူး Big Mac ။
အစား မက်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာ ယုံသွားပြီ ။ ဟီ ဟိ ။
B T W ။ ( 27th ) ည က ၊ Prome မှာ အဘ တည်ခင်းတဲ့ ညစာ စားပွဲ ကို ၊
မခိုင်ဇာ ရဲ့ Double Black ပုလင်းကြီး အချိန်မှီ အချိန်ကိုက် ရောက်လာလို့ ၊
ဂဇက် ရွာသူားတွေ ၊ တစ်ယောက် တစ်လက် ဝိုင်းဖြိုလိုက်ကြသေးတယ် ။
Double Black ပုလင်းကြီး အတွက် ရှဲရှဲနီ ပါ ၊ မခိုင်ဇာ ။
အဲဒါ ကိုဖက်ကက် လက်ချက်ပါ။
ကျနော် အဲလောက် မစားပါဘူးးးးး
Double Black – အဲကိတ်စန ကို လူသိရှင်ကြားမပြောနဲ့လေ။
ညိလေးဇော်သန့် နာမည်သုံးပြီး…သူဘဲ အမျိုးမျိုး လှည့်ကြုံးနေသလိုဘဲ…
တကယ် သူ့ အတွက်ချက်တာလို့။
သူ က နည်းနည်း စားပြီး ကိုယ်က များများ စားဖြစ်သွားတာတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မတုန်းးးး
ဆိတ်သားလေးနဲ့ဆိုပိုကောင်းမယ်ချွေးမွလေးရဲ့။ အမကတော့ ကုလားပဲကိုအစိမ်းချက်တယ်။ ပိုမွှေးတယ်။ တညရေစိမ်လိုက်ရုံနဲ့မနက်ဆို RICE COOKER နဲ့ချက်လို့ရပြီ။ မနက်ဖြန်ထမင်းဆိုင်ကိုရင်ခုန်စွာစောင့် မျှော်နေတယ်အေ။ စာဖိုမှုးဘယ်တူဘာလိမ့်။ ဟိုလူရီးလား။ :sar:
ယောက်ခမ သဲ (ဟိ ခေါ်ရတာ အရသာရှိ၊ ဘယ်သူသိတာလိုက်လို့)
ကျနော် ပဲ က စိမ်ပြီး ပြုတ်တာကို မနူးဘူးလားလို့။
ဆိတ် မရှိလို့ ဘဲ နဲ့ ပဲ။ ဟေးဟေးဟေးးးးးးး
နက်ဖြန်က ဟိုလူရီးချက်မှာ ဟုတ်တယ်။
သူ ၂၇ ကျော်မှ အားမယ်ဆိုလို့ ထမင်းကြော်ပို့(စ) ကို အစားဝင်ထားရတာ။
ပြီးရင် မေမေ့လက်ရာကို မြည်းပြီး
အရသာ ရှိလိုက်တာ မေမေရာ လို့ ခနော ကြော်ငြာထဲက လေသံလေးနဲ့ ပြောမယ်
ချက်နည်းတွေတော့ မှတ်မသွားဘူး..။ နောက်တစ်ခါချက်ရင် ဖိတ်စာပို့လိုက်ပါလို့ပဲ သံချောင်းခေါက်သွားတယ်..။ ဟိဟိ အပျင်းချက်နည်းကို ပိုပျင်းတဲ့သူက ဖတ်ပြီး မန့်သွားတာ..။
မူလ အရသာက မချဉ်ဘူးးးးး
စိမ့်တယ်ခေါ်မားးးး ကျနော့ အလိုဆို အရသာရှိဘူးးး ဟီးဟီးး
ဖဖသန့်နဲ့ အတူစားရင်း ဆီးရီးယားအရေး ဆွေးနွေးဂျင်လိုက်တာကွာ… တူနီးရှားက ခလေးမတွေ ဆီးရီးယားသူပုန်တွေအတွက် ခေတ္တမယားသွားလုပ်ပေးနေဂျဆိုဗဲ…။ မိန်းမဂျီဟတ် လုပ်ပေးဒါဒဲ့..။ အချို့ယောက်ျားတွေဆို သူတို့မိန်းမကို အဲဒီသွားဖို့ အားပေးအားမြှောက်ပြုသဒဲ့..။ အဲဒါလေး စားရင်းသောက်ရင် ဆွေးနွေးရင် ကောင်းမားလို့…။
ဖဖသန့်က ဒီမှာ ၁ လ ခွဲလောက် ကြာဦးမှာ။
ဒါညိုးတွေ ချက်ကျွေးဖို့ ပေါရမယ် … ငှဲငှဲ
သူဂလေး ကြည်ဖြူယင် ချက်ကျွေးလိမ့်မပေါ့
ဟုတ်ဗူးလား သည်းလေး …
ပဲထမင်းကလေ… ကုလားပဲနဲ့ပဲကြိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ ညထဲက ရေစိမ်ထားပြီး အစိမ်းချက်တော့လဲ.. ပဲစေ့လေးတွေက ပူတုံးစားကောင်းပေမဲ့ အေးသွားရင်မာသွားရော… ပြုတ်ချက်ပြန်တော့လဲ ပဲက ပြဲသွားပြီး အလုံးမလှ…. ဟင့် ပဲထမင်းတောင် အဖြစ်ရှိအောင် မချက်တတ်တဲ့မိန်းမပါ…
နာ ပဲ လည်း အဲ့တိုင်းပဲ။
၇ွာသားတွေ ကို ..အစား တွေ နဲ့
မတော် လောဘ တက်..မရနိုင် မှန်း သိရဲ့နဲ့
စိတ် ဒုက္ခ ရောက် အောင် လုပ် တတ် တယ် နော်..
လက်ပံ ခေါင်း လေး တော့ သတိ ရသား ဗျာ..
အရည် သောက် ဆို …. တယ် ကောင်း ပေါ့..
အစား အအိပ် အ ငှား လိုက် ပါသည် …..
နာ ဘဝဟာ တနားစရာပိုကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်က ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မချက်တတ်နဲ့ ဒီလို ကြိုးစား စား နေရတဲ့ ဘွပါ။
ခု လာမဲ့ နားရက်မှာ ဒါလင်နဲ့ တူတူ ချက်စားလိုက်အုံးမယ်.. ငိ.. ငိ..
ပဲထောပတ်ထမင်း နဲ့ ဘဲသားဆီပြန် လိုက်လည်းမလိုက်ဘူး။
ပဲထောပတ်ထမင်းက အပူစာ၊ ဘဲသားဆီပြန်က အအေးစာ ဆိုတော့ကာ ပဲထောပတ်ထမင်းနဲ့ဆို ဆိတ်သား ဒါမှမဟုတ် ကြက်သားဆီပြန်နဲ့ဆိုမှ ဂွတ်မယ်ထင်ပါ၏။
တမီးမှာ ဘဲတွေပဲ ရှိလို့ ဘဲပဲ ချက်ပလိုက်တယ်။
ပြီးတော့သွေးတိုးတာတော့ ဘူ့မှ ပြောတော့ပါဘူးးးး
“B T W ။ ( 27th ) ည က ၊ Prome မှာ အဘ တည်ခင်းတဲ့ ညစာ စားပွဲ ကို ၊
Double Black ပုလင်းကြီး အတွက်ကျုပ်ကလည်းပဲ ရှဲရှဲနီ ပါ ၊ ကေဇီကဗျာလွတ်ရေ…
ပဲထောဘတ်ထမင်းနဲ့ ဘဲသားဆီပြန်လေး လွေးသွာတယ်ဗျို့
ရှူး တိုးတိုးးးးး ပါဆို။
အဲလာ ကိုဂျီးမတ် ပုလင်းဂျီးဟ။
ချေးကြောင်း ငှားကြောင်းတွေ ပြောနေပြန်ဘီ..။
အဲ့ပုလင်းက စတိလောက်သောက်သွားကြတာမို့ ကျုပ်လက်ထဲတ၀ဲလည်ကျန်နေပြန်ဘီ ရယ်..။
ဘယ်လိုပြောပြော ရွာထဲကရွာသူားဒွေ ဆုံဖြစ်တိုင်း..
မှတ်မှတ်ရရ တခုခု လုပ်ပေးနေကြမို့..
ဒေါ်ဆွိ ပို့်စ်ဒွေတိုင်း မစားရညှော်ခံမို့ မနာလို ဖြစ်လာဘီဗျာ..။
အကြိုက်ဆုံး ဟင်းတွေထဲမတော့ ဘဲသားဟင်းလည်းပါပ…။